Sidee dib loogu soo celiyaa feylasha uu tirtiray diskiga U? - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>>so>Sidee dib loogu soo celiyaa feylasha uu tirtiray diskiga U?
Sidee loo soo celiyaa feylasha laga tirtiray diskka U? Faylasha loo tirtiray diskka U looma gelinayo qashinka dib loo warshadeeyo laakiin si toos ah ayaa loo tirtiri doonaa. Xaaladdan oo kale, faylasha laga tirtiraa diskka U ma la soo ceshan karaa? Xiaobian wuxuu ku barayaa khiyaano maanta, oo kuu oggolaaneysa inaad si fudud u soo celiso xog kala duwan oo la tirtiro diskka U. diskooga U disk ayaa ah mid fudud oo la qaadi karo, meel ballaaran oo kayd ah, qiimo la awoodi karo, isla markaana caan ku ah adeegsadayaasha. U disk-ga ayaa si ku habboon u keydin kara una gudbin kara xogta, kooxda adeegsiguna waxay ku fidaysaa dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha. Isticmaalaha sida joogtada ah u adeegsada diskyada 'U disk' waa inay yeeshaan faham qoto dheer, waana ay ka sii adag tahay inay soo kabsadaan feylasha si qalad ah looga tirtiro diskyada 'disk disk'. Sida aan wada ognahay, adeegsadayaashu waxay tirtiri karaan faylasha si shil ah looga tirtiray diskka kombiyuutarka iyagoo aadaya qashinka dib loo warshadeeyo Si kastaba ha noqotee, nidaamka qalliinka wuxuu u tixgeliyaa U diskka sidii qalab keydka ah oo laga saari karo. Marka, sida loo soo celiyo faylasha ay tirtirtay U disk-ka? Sida loo soo celiyo feylasha ay tirtireen U disk
Waxaa jira labo dariiqo oo caadi ah oo loogu talagalay soo kabashada feylasha laga tirtiray diskiga U disk-ga: U adeegso aaladda faylka U disk kabashada si aad u soo kabato, fadlan noqo xirfadle Shaqaalaha si ay uga soo kabtaan. Qalabka kabashada faylka ee loo yaqaan 'disk disk file software' si fudud ayaa looga soo degsan karaa internetka, iyo bogga rasmiga ah ee sayniska iyo tikniyoolajiyadda ayaa bixiya nooc tijaabayn bilaash ah oo ah barnaamijyada soo kabashada xogta. Intaa waxaa sii dheer, softiweerku waa fududahay in la isticmaalo mana u baahna khibrad aad u badan .. Xitaa adeegsadayaasha cadaanku ma laha wax cadaadis ah inay adeegsadaan; wakaalado badan oo soo kabashada ayaa bixiya adeegyo xog soo kabasho, kuwaas oo ay ku shaqeeyaan kuna soo celiyaan xirfadlayaal. Iyada oo ku saleysan sanooyin badan oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan soo kabashada faylka, waxaa lagu talinayaa in barnaamijyada soo kabashada xogta diskka ah loo doorbido. Sababtoo ah, dhibaatada ka soo kabashada feylasha tirtiray ee diskiga U, labada hab ee aan kor ku soo sheegnay waa isbarbar dhiga, sidaa darteed faa'iidooyinka qaabkan koowaad ayaa noqon doona kuwa sii cad. Ka hor inta U disk kabashada xogta, waxaad u baahan tahay inaad diyaarsato qalab disk disk U. Tifatiraha halkan wuxuu kugula talinayaa isticmaalka softiweer soo kabashada. Software soo kabashada xogta ayaa adeegsata kernel soo kabashada xogta softiweerka Bplandatarecovery, taas oo loo qaadan karo nooc muuqaal hoose ah oo ku saabsan shaqada soo kabashada xogta software Bplandatarecovery. Software soo kabashada xogta waxay u qeybisaa howlqabadka soo kabashada xogta 4 qeybood, kuwaas oo wax ka qaban kara dhibaatooyinka kaladuwan ee macluumaadka lumiya. Shaqada "Soocelinta Tirtirka faylalka" ayaa ku habboon dib u soo celinta feylasha laga tirtiray kaydinta U disk-yada iyo warbaahinta kale ee kaydinta. Arrinta la xiriirta bixinta faylka, waxaad u adeegsankartaa soo kabashada barnaamijka softiweerka ah inaad ku sameyso baaritaan heer hoose ah ee faylka la tirtiray si kor loogu qaado soo kabashada faylasha si lama filaan ah loo tirtiray. Sidee dib loogu soo celiyaa feylasha ay tirtireen U disk
Sidee loo soo ceshan karaa faylasha U tirtirey U disk? Casharrada faahfaahsan ee sawirada sawirada
U disk u baahan dib u soo kabashada xogta
Kombiyuutarka ku shaqeeya nidaamka Windows
Tallaabada 1: Ku rakib oo socodso softiweerka soo kabashada xogta. Ha ku rakibin barnaamijka kombuyuutarka USB drive xog lumay, haddii kale xog ayaa la qori doonaa. Tallaabada 2: On interface ka soo kabashada xogta ugu weyn, xulo hawsha "Soo celinta files tirtiray" ka dibna galaan Xiriirka xiga. Soo ceshano faylasha tirtirey. Shaqadan waxay ku habboon tahay luminta macluumaadka sida tirtirka faylka, goynta, iyo luminta aan sharraxaad la gaarin; haddii diskka U loo qaabeeyey si qalad ah, waxaad ubaahantahay inaad doorato "Soocelinta Qeybta Fayl "ikhtiyaar". Tallaabada 3: Xulo U diskka oo leh xog lumay, ka dibna riix batoonka "Next" si aad u gasho gobolka iskaanka. Haddii talaabadani aysan xusin diskiga U ee u baahan soo kabashada xogta, waxaad isku dayi kartaa inaad bedesho dekada USB si aad ula xiriirto oo aad dib ugu bilowdo softiweerka; meesha lagu keydiyo ee diskka U guud ahaan ma weyna, iskaanka ayaa loo baahan yahay Waqtigu waa yara gaaban yahay, sug si dulqaad leh. Sida loo soo celiyo faylasha laga tirtiray U disk
Tallaabada 4: Sahaminta iyo soo kabashada feylasha la tirtiray. Raadi faylka aad rabto inaad ka soo kabato iyada oo loo marayo faylka horudhaca ah (faylka taageeraya aragtida hore, waxay u egtahay marka faylka horay loo sii fiiriyay, iyo waxay u ekaan doonto marka aad ugu dambeyntii soo ceshato). Ugu dambeyntii, hubi faylasha loo baahan yahay oo guji badhanka "Soo celinta" si aad u soo celiso faylasha ay tirtirtay U disk qalad. Sida loo soo celiyo feylasha ay tirtirtay U disk
Mabda 'soo kabashada ee U disk tirtiray faylalka
Waxaan dooneynaa inaad ogaatid sababta U diskiga loo tirtiro Faylasha ayaa dib looga soo kaban karaa, waxaad u baahan tahay inaad si kooban u fahanto waxa dhacay markii U disk-gu uu faylka tirtiray. Si lamid ah diskiga adag, faylka ku kaydsan U disk-ga ayaa loo qaybiyaa laba qaybood: madaxa faylka iyo xogta lafteeda. Madaxa faylka wuxuu diiwaan geliyaa meesha keydka xogta, cabirka, nooca iyo macluumaadka kale Marka faylka la tirtiro, labada lambar ee ugu horreeya ee cinwaanka faylka ayaa wax laga baddali doonaa. Dib-u-habeeynta waxaa lagu dhejiyay miiska qoondaynta faylka faylka waxaa lagu calaamadeynayaa "tirtir" , Calaamee booska U disk-ga ay ku keydsan yihiin xogta faylka sida bilaashka ah, si uusan isticmaaleygu u arki karin feylka, laakiin dhab ahaantii faylka gabi ahaanba lagama tirtirin diskiga U. Ka hor inta faylka cusub loo calaamadin doonin aag xor ah oo daboolaya, isticmaal barnaamijyada soo kabashada xogta xirfadeed, waxaad si buuxda u soo celin kartaa faylka la tirtiray. Waa la arki karaa in dhammaan faylasha uu tirtiray diskka 'U disk' dib looma soo ceshan karo 100% Haddii xogta loo qoro U disk ka dib markii faylka la tirtiro, faylasha lumay waxay u badan tahay inay noqdaan Waa la burburiyey. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad hesho saameyn soo kabasho wanaagsan, waa inaad iska ilaalisaa qorista qalliinka si aad uga fogaato waxyeelada xogta lumay. Soo koobid, kor ku xusan ayaa ah geedi socodka faahfaahsan ee soo kabashada feylasha ee tirtirka disk-ga, waxaan rajeynayaa inay caawin doonto qof walba. Waxaa jira lammaane yar oo u baahan, waxaad kala soo bixi kartaa U disk tirtiray faylka soo kabashada barnaamijka softiweerka bilaashka ah tijaabinta. Wixii macluumaad dheeraad ah ee casharrada soo kabashada ee U disk, fadlan ka fiiri dukumiintiyada kale ee tooska ah websaydhka teknolojiyadda, ama la xiriir adeegga macaamiisha wixii su'aalo ah.
PreMaxaan sameeyaa haddii faylasha kujira diskka USB ay ka maqan yihiin? Sidee loo soo celiyaa xogta di
NextSida loo soo ceshado xogta ka dib qaabaynta U disk